Heerarka koritaanka bisadaha, illaa da'da ay ku koraan? | Bisadaha Noti
Monica Sanchez | | Riyooyin
Bisaduhu waa geedo yaryar oo taas ah way koraan cajiib ah dhakhso. Hal sano gudahood waxay culeyskoodu gaarayaan 100 garaam markay dhashaan 2 ama 3kg toban bilood kadib. Laakiin marka lagu daro, waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin qaangaar 6 ilaa 7 bilood, maxaa yeelay da'daas waxay bilaabaan inay yeeshaan kuleyl, sidaa darteedna, haddii isku dheelitirmo dhacdo, bisaddu waxay dhalan doontaa carruurteeda. Iyada oo kaliya lix bilood, haa.
Laakiin koritaanka bisaduhu ma dhammaado inta lagu jiro sanadka koowaad, laakiin sannadaha labaad iyo saddexaad jirkoodu wuu yara ballaadhi doonaa, sidoo kale miisaan buu yeelan doonaa maaddaama horumarkoodu ku dhow yahay dhammaadkiisa. Ogow marxalad kasta oo saaxiibkaa mari doono oo ku raaxayso mid kasta oo kamaraddiisa gacanta ku haya maadaama wakhtigu dhakhso u gudbayo, isla markiiba waxaad arkaysaa in kubbadda timahaagu ay noqotay Mr. Bisad.
1 Marxaladaha nolosha bisadda
1.1 Bisha koowaad
1.2 Bishii labaad
1.3 Inta u dhexeysa bisha saddexaad iyo lixaad
1.4 Laga soo bilaabo bishii lixaad ilaa sanadka
1.5 Laga soo bilaabo sanadka koowaad ilaa seddex
1.6 Laga soo bilaabo saddex ilaa toddobo sano
1.7 Laga soo bilaabo toddobo ilaa laba iyo toban sano
1.8 Laga bilaabo da'da laba iyo toban
2 Immisa sano ayey bisadu koraan?
3 Goormaad bilaabeysaa inaad aragto oo aad maqasho bisad?
4 Waa maxay cufka jirka bisadu?
Marxaladaha nolosha bisadda
Hoosta waxaan si faahfaahsan uga hadlaynaa heerarka kala duwan ee koritaanka ee bisaddaadu la kulmi doonto inta ay nooshahay. Mid kasta waxaan ku sharixi doonaa isbedelada ku dhaca jidhkooda iyo dhaqankooda si aad u ogaato waqti kasta sida bisadu u korayaan.
Kittens waa dhasheen indhoole iyo dhagoole. Waxay ku tiirsan yihiin hooyada inay ilaaliso heerkulka jidhkooda, quudiso oo nadiif ahaato, maadaama ay ka caawiso inay naftooda iska yareeyaan. Da'daan hore waxay durbaba garwaaqsan yihiin urta candhuufta hooyadood waxaana ku hagta urta inay raacaan iyada, in kasta oo aysan noqon doonin illaa iyo toddobaadka saddexaad ee da'da in dareenkan si buuxda loo horumarin doono.
Ku saabsan laba toddobaad ka dib indhaha ayay furi doonaan, oo waxay bilaabi doonaan inay sahamiyaan deegaankooda, laakiin way yaacaan, waana tan iyo ilaa 17 maalmood aysan si fiican u socon karin. Waqtigaan la joogo, waxay ku dhow yihiin hooyada oo aan ka laba labayn doonin inay ka difaacdo cid kasta oo loo baahdo. Taasi waa sababta marxaladdan ay u fiicantahay in, haddii aan la noolaano eyda, aannaan weligood uga tagi doonin bisadaha.
Saddexda toddobaad naasnuujinta ayaa bilaaban karta, iyaga oo siinaya cuntada qasacadaysan (si ka wanaagsan haddii ay dabiici tahay). Sidoo kale Waa da 'wanaagsan iyaga inay bartaan inay naftooda ku saaraan saxaarad, maaddaama ay naftooda nafis ka qaadi karaan. Waad bari kartaa adigoo si tartiib ah ugu ridaya sanduuqa qashinka cuntada kadib; Sidan ayaad ku arki doontaa sida ugu dhakhsaha badan ee uu u fahmi doono inay tahay meesha ay tahay inuu tago mar kasta oo uu u baahdo.
Muddo afar toddobaad ah ayey bilaabayaan inay midba midka kale ku ciyaaraan, kuna boodaan hooyada oo midba midka kale qaniinto. Marxaladdaan waxay ku baranayaan inay waajib tahay xakamee xoogga ilkahaagamaadaama ay mararka qaar dhaawici karaan.
Indhaha iyo dhegaha shaqeynaya, awood u lahaanshaha joogteynta heerkulka jirka, iyo rabitaanka weyn ee ah in la baaro wax walba, marxalad aad u muhiim ah ayaa bilaabmeysa is dhexgalka bulshada. Si tartiib tartiib ah hooyadood ayaa u joojin doonta naas-nuujinta iyaga, sidaa darteed kittens-ku waa inay bartaan inay wax yar madax-bannaan yihiin. Markaa xilligan waxaa la joogi doonaa waqtigii uu xooluhu xiriir la yeelan lahaa dadka. Waa inaan si tartiib tartiib ah u qaadnaa, oo aan siino salaaxis iyo koolkoolin si ay noogula xiriiraan wax wanaagsan (kalgacal), maadaama la rajeynayo in bisadan aysan dadka ka baqaynin, laakiin ay iska soo horjeedaan.
Iyadoo siddeed toddobaad, waa la qaadan karaa. Laakiin waa inaad ogaataa inay firfircoon yihiin oo aad u cayaar badan yihiin, waa shay laga yaabo in alaabtaadu aysan aad u jeclayn. In kasta oo haddii aad xoqdo ay kuu dhowdahay, wax dhibaato ah uma baahna.
Inta u dhexeysa bisha saddexaad iyo lixaad
Da'daan bisadu "horeyba" waa bisad. Waxaad horey u haysatay wax kasta oo aad u baahan tahay si aad ugu diyaar garowdo qaangaarnimada. Uma baahna hooyo si ay u noolaato, iyo waxay aad ugu dhowdahay inaad bilowdo inaad aado dibada, wax aan kuu oggolaan doonno oo keliya haddii aan si buuxda u hubno inaadan khatar gelin doonin.
Dumarku waxay gali doonaan kuleyl ilaa 6 bilood. Haddii aad kaliya rabto saaxiib, xayawaan rabaayad ah, waxay ka badnaan doontaa inta lagugula taliyay wax u sheeg ama ha ka dhigin (lab iyo dhaddig labadaba) da'daas. In kastoo la sameyn karo inta u dhexeysa 4 iyo 6 bilood, waxaa ugu wanaagsan in la sugo illaa 6, si looga fogaado dhibaatooyinka horumarka (gaar ahaan marka laga hadlayo ragga). Intaas waxaa sii dheer, haddii aad u fasaxdo inuu socod ku baxo, tani waxay ka hortageysaa bisaddaada inay guriga ku timaaddo dhaawac ama, haddii ay tahay haweeney, iyadoo lala yaabo (uur).
Laga soo bilaabo bishii lixaad ilaa sanadka
Hadda haa, waxaad horeyba u haysatay bisad qaan gaar ah. Waxay u muuqan karaan inay hurdo badan yihiin, laakiin waa inaad ogaataa inay jecel yihiin inay ciyaaraan, gaar ahaan habeenkii. Haa, iyagu waa xayawaan habeenle ah, marka haddii aad rabto hurdadaada habeenkii waa inaad ku qasbataa ka faa'iideyso waqtiga aad soo jeedo ee maalintii si aad ula ciyaarto iyo "isaga daal." Suuqa waxaad ka heli doontaa kuwo badan noocyada caruusadaha, sida xargaha, tilmaamayaasha leysarka, xayawaannada cufan ... Xulo kuwa aad u maleyneyso inay sida ugu badan jeclaan doonaan, oo ay la baashaalaan saaxiibkaa dhogorta wanaagsan leh.
Laga soo bilaabo sanadka koowaad ilaa seddex
Inta lagu jiro marxaladdan bisaddu waxay dhammayn doontaa horumarinteeda waxayna bilaabi doontaa inay muujiso dabeecadaha qaan-gaarka. Waa wax iska caadi ah in sannadahan samee waxaad rabto, isagoo aan adeecin xitaa awaamiirta aan isaga siino. In kasta oo ay weynaadeen, haddana waa eyyo yaryar oo jecel inay ciyaaraan oo soo jiitaan dareenka, wax ay had iyo jeer gaaraan, sax?
Laga soo bilaabo saddex ilaa toddobo sano
Si tartiib tartiib ah ayaynu u ogaan doonnaa in bisadeena aysan rabin inay u ciyaarto sidii hore. Waqti badan ayuu ku qaataa hurdada (qiyaastii 14:XNUMX duhurnimo maalintii), iyo dabeecadihiisa noqda dhul badan hadday ku habboon tahay. Xaqiiqdii, laga bilaabo da'daas waa adagtahay (laakiin macquul maahan) inuu aqbalo bisad cusub oo kajirta dhulkiisa, taas oo, habka, ay tahay gurigaaga.
Laga soo bilaabo toddobo ilaa laba iyo toban sano
Laga soo bilaabo da'da toddobada sano bisad ayaa bilaabaneysa da'da. Waxay noqdaan xitaa kuwo deggan, deggan. Saaxiibkaaga waqti badan ayuu ku qaadan doonaa nasashada, oo ciyaar badan maahan. Dabcan, way sii wadi doontaa inay sidaas sameyso mararka qaarkood, laakiin markaad ku sii dhowaaneyso sanadaha waaweyn mar dambe ma yeelan doontid rabitaan aad u badan ka ceyrsashada alaabta lagu ciyaaro.
Laga bilaabo da'da laba iyo toban
Bisadu waa duq. Waxaad ogaan doontaa sida ay rabitaankiisu u yaraado, iyo in dareenkiisu xumaado. Waa la soo saari karaa isbeddelada maqaarka, horumariyo hyperthyroidism y cidiyahoodu aad ayey u weynaan karaan adeegsi yar awgeed. Waqti yar ayey ku qaataan qurxinta, wax aan waqti badan ku qaadan doonin in lagu arko jaakadooda, taas oo lumineysa dhalaalkeeda.
Cimriga bisadu waa ilaa 25 sano. Laakiin iyadoon loo eegin sida ay u socoto, haddii aad siiso daryeel, dareen iyo jacayl badan, saaxiib kuu noqon doona.
Sida loo daryeelo bisad duug ah
Immisa sano ayey bisadu koraan?
Muddo intee le'eg ayay bisaduhu koraan? Sidaan soo aragnay, bisadu waa doofaarro taas wuxuu leeyahay koritaan aad u dhakhso badan. Hal sano gudahood, lafahaaga iyo muruqyadaadu waxay gaarayaan qaan-gaar. Tani waxay ka dhigan tahay inaad hubaal ahaan diyaar u noqon doonto inaad 'aragto adduunka' ama, haddii ay dhacdo inaad ka bixi weydo, inaad noqotid Bisad Sayid.
Dabeecaddiisa waxaan ogaan doonnaa inay isbeddelayso, inyar ooyar. Doonista ciyaarta ayaa sii ahaan doonta mid sarreysa, laakiin markii waqtigu dhammaado, wuxuu doorbidi doonaa kal-ka-warqabasho oo maahan madadaalo badan. Laakiin iska jir, tani macnaheedu maahan inaannaan la ciyaareynin, laakiin si fudud uma arki doonno inuu la ordayo xoog badan sidii markii uu eey ahaa.
Laakiin, in kasta oo ay jirto in lagula taliyay in la siiyo quudin (croquettes) bisadaha dadka waaweyn laga bilaabo sanadka nolosha, horumarkiisa wali ma dhamaan doono. Haddii inta lagu jiro bilaha ugu horreeya lafa-weynteeda ay soo ifbaxdo, laga bilaabo sannadka labaad waxaan arki doonnaa inuu 'jidh qaadanayo', inuu sii ballaadho. Waa marka murqaha dhammaado inuu soo baxo. Horumarkaani wuxuu socon karaa wax ka badan ama ka yar, iyadoo kuxiran cabirka ugu dambeeya ee xayawaanka iyo nooca, laakiin badanaa waxay dhammaan doonaan 3 sano.
Wixii intaa ka dambeeya, iyo aragtidayda, waxaan lahaan doonnaa bisad qaangaar ah oo dhab ah, dhinac walba.
Goormaad bilaabeysaa inaad aragto oo aad maqasho bisad?
Guud ahaan, qaado inta u dhexeysa 9 iyo 16 maalmood. Awoodda aad ku bilaabi karto maqalka iyo inaad aragto waxay u muuqdaan ku dhowaad isla waqtigaas. Haddii aan indhaha saarno, marka hore waxay noqon doonaan buluug, laakiin ayaamahaba markay socdaan, midabkooda ugu dambeeya ayaa la qeexi doonaa, kaasoo noqon kara midab cagaaran, bunni ah ama ka badan huruud ah oo kuxiran hidde ahaan.
Dhegihiisa, oo ku dhaganaa dhalashadii, ayaa hadda furmay oo bilaabay inay waxtar u yeeshaan bisadda. Waad ku mahadsan tahay iyaga, in yar oo yar dareenka isku dheelitirka ayaa xukumi doona, maadaama ay ku taal dhegta dhexe ee dheg kasta.
Waa maxay cufka jirka bisadu?
Miisaanka bisadu wuu kordhayaa kolba markuu korayo. Sidaa darteed, hoosta waxaan kuugu sheegi doonaa waxa celceliska miisaanka uu yahay:
Dhaladka: 100 garaam
Toddobaadka ugu horreeya: 115-170 garaam
2-3 toddobaad: 170-225 garaam
4-5 toddobaad: 225-450 garaam
Bilaha 2: 680-900 garaam
Bilaha 3: 1,4 kiilo
Bilaha 4: 1,8 kiilo
Bilaha 6: 3 kiilo
Laga soo bilaabo nuska sanad noloshiisa iyo ilaa uu ka gaarayo laba iyo toban bilood, inta u dhexeysa 100 ilaa 150 garaam ayaa lagu daraa qiyaastii bishii. Laakiin waxaa jira bisado badan oo aan dhammayn doonin koritaankooda illaa laba sano ka dib, taas oo noqon doonta markay gaadhaan culayskooda ugu sarreeya oo qiyaastii ah 4 kiilo celcelis ahaan.
Ogaanshaha heerarka kala duwan ee koritaanka bisadaha ayaa wax badan kaa caawin kara inaad fahamto horumarkiisa. Marka waxaan rajeyneynaa in qodobkaan uu waxtar kuu yeeshay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Riyooyin » Koritaanka bisadaha
Matias Amaru Valdivia Silva dijo
Macluumaad aad ufiican, macno ahaan waxkasta oo aan raadinayay, waxaan qaatay 3 kittens oo mar horeba waxaan haystaa mid weyn, waxay kudhowaad 3 sano jir mana dhibayso bisadaha wax kayar 6 bilood.
Jawaab ku bixi Matías Amaru Valdivia Silva
Waan ku faraxsanahay inay kuu anfacayso, Matías 🙂.
Waxaan la yaabay mawduuca ah inay dhammeeyaan horumarka u dhexeeya 2 iyo 3 sano nolosha. 3 sano kahor waxaan qaatay bisad horey u jirtay 5 bilood. Waxay ahayd timo gaagaaban ilaa sanad iyo badh ay bilaabatay inay soo baxdo dhogor badan iyo manjo u eg libaax oo ay qoorta ku hayso. Waxaan ku noolahay cimilo diiran qiyaastii. 28 illaa 36 C taasi waa sababta uusan iigu sharixin koritaanka dhogortiisa.
Ku jawaab Kyle
Waxaan hayaa bisad yar oo shan bilood jir ah habeenkii waxaan seexiyay meel xayeysiis hoosaad xiran oo xira maalinta xigtana waan soo saaraa oo waxaan ka dhigaa inay ku dhex oroddo oo ay ku ciyaarto qolka fadhiga, waxaan bil la joogay guriga, laakiin maalin dhaweyd waxaan booqasho ku imid qaar ka mid ah asxaabta iyo habeenkii Sida had iyo jeer nus shuminta ka hor hurdada laakiin tan iyo habeenkii markaan sii daayay iyada waxay ahayd. Aad ayey u baqeysaa oo si daran ayey ii sifeeysay si ba'an, badh bay dhunkatay oo waxay bilawday inay madaxa ruxdo oo ay afkeeda ku sameyso waxyaabo yaab leh, sida uu ii sheegay saaxiibkeey, waxay raacisay in baranbaro yar ay dhegteeda gasho laakiin ma arag Midkoodna sidoo kale iima sheegin in sida bisadu u dhimatay, maadaama ay beed jiifaan, lacag ma haysto illaa dhammaadka bisha oo aad baan uga walwalsanahay dhinacayga oo cun, si fiican u cun iyo ciyaar laakiin Ogow waxa dhacay ilaa maalintii aan booqashada ka nimid deriska, ama waxa ay sameysay gabadha mid ka mid ah derisyadan maxaa yeelay tan iyo markaas waxaan ka arkaa meel wax yar ka fog, fadlan iigu soo jawaab sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, waad ku mahadsan tahay ka soo qaybgalkayga
U jawaab Mary
Hagaag, horta, qofna, qof iyo bisad midna uma dhiman karo cayayaanka ku dhaca dhegta dhexdeeda 🙂 Qeybtaan, ha ka welwelin.
Waa kuwee haa, waxay noqon kartaa mid aad u dhib badan. Xitaa haddii aadan arkin, haddii aad run ahaantii mid leedahay, wuxuu ku qarsoonaa dhegtaada gudaha.
Warka fiicani wuxuu yahay, intaad tirisay, waxaad moodaa inuu tartiib tartiib u hogaaminayo nolol caadi ah. Laakiin haddii dhaqankaagu isbeddelay ilaa maalintaas, waxay u badan tahay in qof ama wax dhibaato kuu keenay.
Waxaan kugula talinayaa inaad la hadasho asxaabtaada, dhamaan inta gurigaaga ku jirtay, si aad u ogaato waxa ku dhici lahaa iyada. Caadi ma aha in bisadu maalin uun ka beddesho dabeecaddeeda. Wax aan fiicnayn waa inay ku dhacday isaga.
Waad ku mahadsantahay macluumaadka, runtii waa wax aad u faa'iido badan, waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan la wadaago waayo-aragnimadayda kittens tan iyo markii aan marwalba doonayay inaan qaato mid, waxay i siiyeen mid yar, ma ahan labo todobaad oo ay dhaaftay wayna baxsatay, ta labaadna waxay ahayd mid dagaal badan oo iyagu waa iga xaday, ujeedku wuxuu yahay waxaan go aansaday in aan qaato laba bisadood iyo walaalo waaweyn oo rag iyo dumarba leh oo guri lagu kala tagay, aadna waan ugu faraxsanahay iyaga si fiican ayey u la dhaqmeen kamana baxsadaan halkaan waxay ku dareemayaan farxad. iyo taladaydu maahan inay kaliya raadsadaan inay qaataan koombiyo yar yar laakiin waayeelka ayaa sidoo kale aad ugu mahadnaqa oo si fiican ula qabsada hadaad siiso kalgacal iyo kalgacal badan, hadii ay korsadaan kuwa waaweyn, kama qoomameynayaan.
Ku jawaab Paola Acuña
Waad ku mahadsantahay inaad noosheegtay sheekadaada Paola.
Waxaan jecel nahay dhamaadka farxad 🙂
Waad salaaman tahay, waxaan u helay maqaalkan sababtoo ah waxaan dareemayaa sida bisaduhu aysan u sii kordheynin si dhakhso ah, waxay ka badan tahay laba bilood jir mana arko horumar weyn. Ma aqaano haddii aan ku fashilmayo cunnadiisa.
Waad salaaman tahay Andrea.
Immisuu miisaan yahay? Sikastaba, haduu kan yari sifiican wax u cunayo oo nolol caadi ah ku socdo, haka walwalin. Waxaa jira bisado sii yaraada.
Waad salaaman tihiin, walaashay waxay leedahay laba kittens oo shan bilood jira oo ay yar yihiin, culeyskoodu wuxuu ka badnaan doonaa 500 garaam ama 600 garaam mana arko inay wax badan korayaan waana walwalsan nahay
Ku jawaab Maguy
Miyaad ka diirtay iyaga? Haddii kale, waxaan kugula talin lahaa inaad u kaxaysatid dhakhtarka xoolaha si ay kuu siiyaan dawo ciribtira gooryaanka.
Haddii ay caafimaad qabaan, ma jiraan wax laga walwalo. Waxaa jira bisado sii yaraada.
Waa salaaman tahay, wanagsan yahay oo la korsaday bisad bil jir ah maanta bil ka hor toddobaadkiina culeyskiisu yahay 337 garaam ma ogi inuu culeyskiisa ahaan doono iyo inuu caadi yahay, carruurtiisii ​​yarayd ayaa si lama filaan ah u dhimatay bisadani waxay cunaysaa pokito a pokito maanta x tusaale x subixii in la cuno Laba cunto oo fudud wuuna seexday, waan ka walwalsanahay, haddii isla waxaas oo kale ay ku dhacaan isaga, anigu waxaan ahaa kan ugu cajaa'ibka badan saddexda, laakiin ugu dambeyn, isagu ma ciyaaro wax badan.
Ku jawaab Natalia
Mukulaasha caafimaadka qabta waa inay ahaataa mid cagaar leh caloosha wareega; buunbuunin la'aan, laakiin markaad gadaashaada ka fadhiisato waa inaad dhabarkaaga u jeeddaa garbaha wax ka yar ama ka yar oo toosan, ka dibna gooladahaaga.
Hadaad dhahdo waad aragtaa iyada oo murugeysan, oo aad ku xisaabtamayso in walaalaheed ay dhinteen, waxaan kugula talin lahaa in aad sida ugu dhakhsaha badan ugudbiso dhaqtarka xoolaha. Waxaa laga yaabaa inaad qabto dulin ku dhaca xiidmaha (Gooryaanka), oo si aad u baabi'iso waxaad u baahan doontaa inaad sharoobo qaadatid.
Waad salaaman tihiin, warbixintaadu waa mid aad u xiiso badan, waxaan qaatay bisad yar, uma ogolaanayo inay banaanka u bixiso waxaanan ka baqayaa inay iga tagto.
Sideen uga joojiyaa inuu baxo?
Ku jawaab Nayeli glz
Waa inaad waqti badan la qaadataa iyada: la ciyaariddeeda, la joogitaankeeda. Intaas waxaa sii dheer, sidoo kale waa muhiim in lagu tuuro iyada 6 bilood si looga hortago iyada oo daneyneysa inay u baxdo raadinta lammaane.
Waad salaaman tihiin, bisadayda 5 bilood jirta ayaa banaanka u soo baxday oo sida muuqata la baxday bisad 🙁 Nacaladii ayaa soo noqotay iyada oo aad u xoodan. Su’aashu waxay tahay, ma uur qaadi kartaa 5 bilood oo keliya? Hadday sidaas tahayna, weli miyaa la nadiifin karaa, mise waa inaan sugaa?
Ku jawaab Valeria
Waa salaaman tahay.
Haa sax. Waad u qaadan kartaa inaad ku shaqeyso hadda dhibaato la'aan.
Waxaan ka soo qaaday bisad gabdho yar oo dariiq ah waxaanan kor ugu qaaday dhalooyin waxaanan siiyay diirimaad, waa qurux aad u qurux badan oo indho buluug ah leh iyo dabo xiiran oo xiiran. Aad buu u ciyaaraa wuuna jecel yahay inuu banaanka u baxo, waxaan ku noolahay aag guryo ah, waan dewersanahay hadana isbuucaan waxaan u socday inaan talaalo oo aan gashado xip, laakiin khamiistaan ​​wuxuu ka tagay 11 iyo aniga weli ma arag isaga, waxaan ka raadiyay hareerahaaga oo dhan ayaa la weydiiyay deriska.
Su'aashaydu waxay tahay bisadan yar ma iska tagi kartaa ama kuleyl ayey ku jirtaa .. Uma maleynayo inay ku adag tahay inay soo noqoto.
waxaa laga yaabaa in qof qaatay, laakiin waxay ahayd mid aad u deggan
Ku jawaab Olga
Meeqo sano ayey jirtaa Markay tahay 5-6 waxay badanaa rabaan inay baxaan, mararka qaarkood xitaa waqti hore (4 bilood iyo badh ama wixii la mid ah).
Ku saabsan su'aashaada, waxay u badan tahay inuu dhow yahay, oo la qariyo. Bisaduhu badanaa ma foga, way yar yihiin hadday da 'yar yihiin. Ka fiiri baabuurta hoostooda iyo meelaha laga yaabo inuu ka helay si aad u aragto inuu nasiib leeyahay.
Waad salaaman tahay, waxaan haystaa bisad yar oo jir ah, seddex bilood ka dib timo luminta ayaa dhibka noogu weyni waa mid aad u tiro badan oo aad la samaysan karto, waxaad la tashanaysaa dhakhtarka xoolaha oo sida muuqata waa iska caadi, mana ahan annaga, waa waa Waxaan badalnay cunnadiisa 4 jeer sanadkii, wuxuu hayaa cunto xumo, hada wuxuu cunaa Mirringo, ma ogin inay sifiican ugufiicantahay, qaar waxay dhahaan waa walaac, qaarna fiitamiin la'aan, horeyna waxaan ugu iibsanay raashin qaali ah , oo waan aqriyay inay si lama filaan ah u dareentay kelinimo, waxaan keenay laba 2-bilood jir lab iyo dhadig oo walaalo ah, ma aysan awoodin inay la wadaagto, waxay kala jabtay lugta yar waxaana rajeyneynaa inay soo kabsato deg deg ah, waxaan kaliya waxaan doonayaa inaan arko iyada oo faraxsan, qurux badan, deggan, aad ayaan u jecel nahay iyada, waxaan rajeyneynaa inaan xalliyo dhibaatada timaha mahadsanid !!!
Jawaab Alex Devia
Waxaan kugula talinayaa inaad siiso quudin aan hadhuudh lahayn. Hubi calaamadda maaddada, iyo haddii aad hesho boorash, galley, shaciir, ama dalag kasta oo kale, iska tuur.
Kuuma sheegi karo haddii ay tahay cuntada iyo in kale waxa bisaddaada ka dhigaya timo, maxaa yeelay waxaa jira sababo dhowr ah oo timuhu u dhici karaan, (Halkan waxaad ka haysaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan), iyo ka sokow anigu ma ihi dhakhtar xoolaha ah. Laakiin khibrad ahaan waxaan kuu sheegi karaa in xayawaannada hilibka cuna sida bisadu ay tahay markay cunto cunno tayo leh, oo aan lahayn badarka, waxay leedahay jaakad caafimaad iyo dhalaal leh.
Hello, waxaan korsaday 2 kittens, walaalo yaryar qiyaastii 4 bilood ka hor, lab iyo dheddig, farqiga u dhexeeya cabbirka markii aan korsannay wuu yaraa, waxay jireen 4 bilood, laakiin hadda waa badan yahay, wiilku aad buu u weyn yahay gabadhu aad bay u yar tahay., waan ka welwelsannahay, ma naqaanno in wiilku aad u korayo iyo in gabadhu aysan korin
Ku jawaab ok
Bisadaha labka ahi waxay u muuqdaan inay ka weyn yihiin dheddigga. Mabda 'ahaan ma jiraan wax laga walwalo haddii ay si kale u caafimaad qabaan.
Kumaa ahaa Don Gato, xayawaanka aaminka ah ee Auronplay
Da'dee ayey bisaduhu keligood wax cunaan